वेब सामग्री स्क्रैर: के यो वेबबाट डाटा प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हो? - अर्ल्ल्टले जवाफ दिन्छ
वेबबाट डेटा प्राप्त गर्दै सधैं सजिलो काम छैन. तपाईंले सम्भवतया सबै चीज खोज्नु भएको साइटमा फेला पार्न सक्ने डेटा समावेश गर्दछ तर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न वा यसको सामग्री प्रतिलिपि र टाँस्न सक्नुहुनेछ. यद्यपि, हार नदिनुहोस्! त्यहाँ थप हेरफेरको लागि उपयुक्त ढाँचामा डेटा प्राप्त गर्न केहि उन्नत तरिकाहरू छन्:
तपाई वेब-आधारित API हरू (अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इन्टरफेसहरूबाट डेटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ). फेसबुक र ट्विटर जस्ता धेरै वेब अनुप्रयोगहरू इन्टरफेसहरू प्रदान गर्दछ जुन तिनीहरूको डेटामा सजिलो पहुँचलाई अनुमति दिन्छ - web site paketleri. यस्तो इन्टरफेस प्रयोग गरी व्यावसायिक र यहाँ सम्म कि सरकारी डेटा प्राप्त गर्न सजिलो छ.
तपाईले पनि PDF बाट डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ. यद्यपि, यो सजिलो नहुन सक्छ किनकि PDF ले प्रिन्टरहरूको लागि उपयुक्त ढाँचा हो. त्यहाँ पीडीएफबाट डाउनलोड गर्दा आवश्यक डेटाको ढाँचा गुमाउन सक्दछ.
वेब डेटा निकाल्ने एक उन्नत तरीका - वेबसाइट को प्रयोग गरेर डेटा निकालन सामाग्री स्क्रैपर .
एक वेबसाइट सामाग्री स्क्रैर किन प्रयोग गर्न को लागी?
अनलाइनमा उपलब्ध सामग्रीको परिवर्तनशील स्वभाव र वेब आधारित प्लेटफर्महरूको जटिलतामा लिनु, तपाईलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नको लागि वेबसाइट वेबसाइट को प्रयोग गरी विचार गर्नु पर्ने थुप्रै कारणहरू छन्।. यहाँ यी कारणहरूको संक्षिप्त विवरण हो:
घडी बिना कुनै साइट स्क्रैपिंग
दर-सीमा डेटा प्राप्त गर्न एक तरिका छनौट गर्दा विचार गर्ने विचार नेटबाट. अभ्यासमा, यसको मतलब छ कि संख्या को संख्या मा सीमा सेट गर्ने वाला आगन्तुक साइट को बिना डीडीओएस को रूप मा विचार गरे बिना साइट को उपयोग गर्न सक्छन् (सेवा को अस्वीकार को अस्वीकार. ) आक्रमण. यदि तपाईं आफ्नो डेटा निष्कर्षण अनुभव भन्दा बढी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक उचित वेब सामग्री स्क्रैपर प्रयोग गर्नुहोस्।. साइटहरु को बहुमत आफ्नो सामग्री को स्क्रैपर्स देखि नहीं बचाते ताकि तपाईं आवश्यक जानकारी बिना कुनै पनि मुद्दा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ.
स्क्रैपिंग गर्दा गुमनाम रहनुहोस्
यदि तपाइँ निजी रूपमा वेबबाट डाटा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, वेब स्क्रैपिंग यो बारेमा जान्न उत्तम तरिका हो. एक वेब सामाग्री स्क्रैपर बिना तपाईंलाई रेजिस्टरिंग गर्न सरल HTTP अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईंको कुकीज र आईपी ठेगानाको अलावा, तपाइँलाई साइट प्रशासकको नेतृत्व गर्न सक्ने कुनै पनि अन्य चीज छैन.
वेब स्क्रैपिंगले तपाईंलाई डाटा उपलब्ध गराउँछ जुन सजिलै संग उपलब्ध छ
वेब स्क्रैपिंग एक रॉकेट विज्ञान होइन. संगठनमा कोहीलाई सम्पर्क गर्न वा एपीआई खोल्न साइटको प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छैन. केवल केहि आधारभूत पहुँच ढाँचाहरू पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईंको वेब सामग्री स्क्रैरले बाँकी काम गर्नेछ.
तपाईं प्राय: कुनै पनि साइटबाट सबै प्रकारको डेटा प्राप्त गर्न (4 9) वेब स्क्रेटरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।. यसैले, अन्य डाटा निकासी प्रविधिहरूको तुलनामा वेबबाट डेटा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो. अर्को पटक तपाईं वेबबाट कुनै डाटा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, वेब सामग्री स्क्रैर प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको काम सधैँ भन्दा धेरै सजिलो र रोचक हुनेछ।.